ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အောင်ဆန်း ပြောစကားကို မန်းတလေးဂဇက်က ဖျက်ပယ်ပါသလား ( Suspended By Mod –6) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အောင်ဆန်း ပြောစကားကို မန်းတလေးဂဇက်က ဖျက်ပယ်ပါသလား ( Suspended By Mod –6)
Posted by kalarlatt on Oct 28, 2012 in Contributors, Letter to The Editor, Moderator, Myanmar Gazette |4comments
သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ရှေးယခင်ကတည်းက ဗမာနဲ့ကုလား ( မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယ ) မတည့်ကြ ဘူး။ ဗမာဖက်က ကုလားကိုမနိုင်တော့ ရခိုင်ကိုမဲပါလေရော။ စကားပုံတောင် ရှိနေသေး။ နောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်က ဗမာတွေရဲ့ လက်အောက်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ မလွဲသာလို့ဆက်ဆံနေရပေမယ့် ဗမာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးစုရဲ့အာဃာတတရား ပျက်ပြယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ တစ်ချိန်တုန်းကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်နိုင်ငံတော်အဖြစ် သီးခြားခွဲထွက်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိသာနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဘဲအောင့်အည်းလာခဲ့ရာကနေ သူတို့နယ်မြေအောက်မှာ ရေနံသိုက်ကြီးရှိနေကြောင်းသိလာတော့ မတရားလောဘတွေ ၀င်လာကြပုံရပါတယ်။ တူးဖော်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုယင် ကုဋေကြွယ်သူဌေးတွေ တန်းစီပြီး ထွက်လာပြီပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်မှာ ဗမာကိုလည်း မလှန်နိုင်။ သီးခြားနိုင်ငံလည်း ထူထောင်ချင်။ ဒီတော့ ဘာလုပ်မလဲ။
ဧရာမပြဿနာကြီးဖန်တီးနိုင်ယင် အခွင့်အရေးလမ်းစတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကောင်းတယ်လို့ တွေးမိကြမှာပေါ့။ ကုလားမနိုင် ရခိုင်မဲ ဆိုပြီး တစ်သက်လုံးတွင်လာတဲ့စကားပုံကို ဗမာမနိုင် ကုလားမဲ အဖြစ် essence ပြန်ပြောင်းလိုက်သလားတော့မသိဘူး။
ဒေါက်တာ အသျှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဥသျှောင် သင်းကျိတ် မကိဋ်သရဖူ ကုလားလတ် has written4post in this Website..
View all posts by kalarlatt →
သိပ်လွန်ပြီ ထင်တယ်! ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလဲပြော?
ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိနဲ့ နာမည် မျိုးစုံသုံးပြီး အားအားယားယားဗျာ….
ခင်ဗျားမှာ ဒီ ” စီးပွါး ” ပဲရှိလား….?
မြန်မာလူမျိုးထဲတွင် ကုလားမပါ ပါ..။ ဗမာတွေအနိုင်ကျင့်သည်ထင်လျှင် အချိန်မရွေးထွက်သွားနိုင်သည်…။ ဧည့်သည်က ဧည့်သည်လိုနေသ၍ အဆင်ပြေပါသည်..။ အိမ်ရှင်မဖြစ်ရလို့ မကျေနပ်လျှင်ထွက်သွားပါ…။ ထွက်သွားမည်ဆိုလျှင် ဘယ်သူမှ ဆွဲမထားပါ….။
အဲဒီလို ကိုယ့်ဘာသာ အတွက် လူသတ်နေတာ၊ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ပြသနာ ဖြစ်နေတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။
ရှင်တို့ ဒီ အတိုင်းအဆက်သွားရင် ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပြန်ပတ်ကြမယ်။
ပြသနာ ဖွ နေတာ လာပြီး မလုပ်စေချင်ပါ။
အခုဟာက သူခိုး က လူလာဟစ် သလိုဖြစ်နေပြီ။
ဆွေးနွေးရဲရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆွေးနွေးပါ။
မဟုတ်ရင် သက်သက်ဖွတာ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှက်သင့်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အဆင့်တောင် ကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့ လာမပြောပါနဲ့